परिक्षण उत्पादनको तयारीमा मिस्ट्रीखोला जलबिद्युत आयोजना – धौलागिरी खबर
परिक्षण उत्पादनको तयारीमा मिस्ट्रीखोला जलबिद्युत आयोजना
धौलागिरी खबर	 २०७७ चैत्र १, आईतवार ०९:४८ गते मा प्रकाशित 536 0
बेनी, म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङमा निर्माण भएको ४२ मेगावाट क्षमताको मिस्ट्रीखोला जलबिद्युत आयोजनाले यसैहप्तादेखि बिद्युत उत्पादन सुरु गर्ने भएको छ ।
माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड प्रर्वद्धक रहेको मिस्ट्रीखोलाले निर्माण भएका संरचना तथा जडान गरिएका उपकरणको परिक्षण सकेर उत्पादनको तयारी गरेको हो । आयोजनाको परामर्शदाता इञ्जिनियर दिवाकर खड्काले सुरुङ, पेनस्टक पाइपलाइन र बिद्युतगृहको परिक्षण सरेर बिद्युत उत्पादनको तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो ।
‘‘दाना सबस्टेशनदेखि स्विचार्डसम्म ब्याकलोडमा प्रशारण लाइनको परिक्षण भइरहेको छ,’’ उहाँले भन्नुभयो ‘‘ड्याममा पानी थुनेर सुरुङमा पानी हाल्ने र टर्वाइन घुमाउने तयारीमा छौ ।’’ बिद्युतगृहमा जडान भएको जेनेरेटर, टर्वाइन र ट्रान्सफर्मरको पनि परिक्षण सकिएको छ ।
इञ्जिनियर खड्काले अबको एक हप्तादेखि दश दिनभित्र मिस्त्रिखोलाले उत्पादन सुरु गर्ने बताउनुभयो । सन २०१६ को जुन १३ मा सुरु भएको आयोजनाले निलगिरि र घलेम्दी खोलाको दोभानमा २३ मिटर अग्लो बाँध बनाएको छ । दुई हजार २७०.५ मिटर सुरुङबाट ल्याएको पानी २५० मिटर उचाइबाट खसालेर बिद्युत उत्पादन गर्न एक हजार ५०० मिटर पेनस्टक पाइप जडान गरेको छ ।
बेशीगाउँदेखि दाना स्थित २२० केभी क्षमताको सबस्टेशनसम्म १३२ केभी क्षमताको ४ किलोमिटर प्रशारण लाइन निर्माण गरेको छ । ११ वटा मध्य गत बर्खामा आएको बाढीले एक वटा टावर ढलाएको र अर्को कटानको जोखिममा परेको थियो । जोखिममा परेको टावर स्थानान्तरण र ढलेको पुननिर्माण गरेको हो ।
यसैगरी नविल बैंकले रु. एक अरब, लक्ष्मी बैंकले रु.४० करोड, सिद्धार्थ बैंकले रु. ३० करोड र एस डेभलभमेन्ट बैंकको रु.३० करोड ऋण लगानी रहेको छ । आयोजना निर्माण स्थल नारच्याङका बासिन्दालाई सात लाख तीन हजार ५१२ र प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अन्य ७ वटा वडाका बासिन्दाहरुलाई दश लाख कित्ता सेयर बाँडफाड गरिएको छ ।
साधारण सेयर पनि बाडफाँड भइसकेको छ । विद्युत विकास विभागले २०६४ मा जनेरेशन लाइसेन्स (निर्माण अनुमति) दिएको थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २२० केभी कालीगण्डकी करिडोर प्रशारण लाइन र दाना सब स्टेशन बनाउन ढिलाई गर्दा आयोजना नौ वर्ष पछि निर्माण सुरु भएको थियो ।
मिस्ट्रीखोला म्याग्दीमा हालसम्म निर्माण भएका र निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका मध्य सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो । नारच्याङमा २ मेगावाट क्षमत्ताको तातोपानी साना जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा छ । ५ मेगावाटको घलेम्दीखोलाले २०७६ माघ महिनादेखि उत्पादन सुरु गरेको छ ।
अन्नपूर्ण–३ दाना देखि पर्वतको खुर्कोट जोड्ने ३९ किलोमिटर दुरीको २२० केभी क्षमताको बिद्युत प्रशारण लाइन निर्माण सकिएको छ । आयोजनाका प्रमुख चन्दनकुमार घोषले मिस्त्रिखोलाको बिद्युत सबस्टेशनमा जोड्न प्रशारण लाइनको परिक्षण सुरु गरिएको बताउनुभयो ।